कहाँ कुन् दल विजयी भए ? यस्तो छ ताजा परिणाम - Karobar National Economic Daily
कहाँ कुन् दल विजयी भए ? यस्तो छ ताजा परिणाम
query_builderMay 15, 2017 11:27 AM supervisor_accountकारोबार visibility5359
काठमाडौँ: आइतवार सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम धमाधम आउन थालेको छ । अहिलेसम्मको परिणाममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफूलाई अग्रस्थानमा राखेको छ ।
उसलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पछ्याइरहेको छ । तेस्रोमा अर्को सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको छ । मतपरिणाम आइरहँदा तालमेल गरेका ठाउँमा दलहरुले झट्का बेहोर्नुपरेको छ ।
एमालेले जित निकालेका स्थानीय तह
एमालेले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. ५ मा जित निकालेको छ । त्यहाँ वडाअध्यक्षमा एमालेका जुमबहादुर गुरुङ विजयी भएका छन् ।
कास्कीको मादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर -१ मा एमालेको प्यानलै विजयी भएको छ । अध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार सुरज गुरुङ्गसहित प्यानल विजयी भएका छन् । सो वडामा एमालेले ५५७, कांग्रेसले ४३४ र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले १४ मत प्राप्त गरेका छन्।
त्यसैगरी धादिङ गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नं. ५ मा पनि एमालेल वडाअध्यक्ष जित निकालेको छ । ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिका-६ को वडाअध्यक्ष रामकृष्ण आचार्य विजयी भएका छन् ।
त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ७ को वडाअध्यक्षमा पनि एमाले विजयी भएको छ ।
मनाड्डको चामे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा लोकेन्द्रमान घले विजयी भएका छन् । त्यसैगरी मनाङकै नेस्याङ गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको छ । त्यहाँ कान्छा घले गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका हुन् ।
प्रदेश नम्बर ६ को दैलेख जिल्लास्थित डुङेश्वोर गाउँपालिका-१ को वडाअध्यक्षमा लोकबहादुर डाँगी विजयी भएका छन् । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका-५ को वडाअध्यक्षमा चिजा गुरुङ विजयी भएका छन् ।
स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा घनश्याम सुवेदी विजयी भएका छन् । जुम्लाको गाँठीचौरमा पनि एमाले विजयी भएको छ ।
सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिका वडा नम्बबर १ मा एमालेका अध्यक्ष मानबहादुर पुनसहित पुरै प्यानल विजयी भएका छन् । त्यसैगरी मुस्ताङको बारह गाउपालिका मुक्ति क्षेत्र वडा नम्बर-५ मा एमालेका राके गुरूङ विजयी भएका छन् ।
अर्कातिर कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. १ मा हर्ष महर्जनसहित एमालेको प्यानल नै विजयी भएको छ । मकवानपुरमा नेकपा एमालेले थाहा नगरपालिका-५ मा जित निकालेको छ । त्यहाँ बिष्णुबहादुर गुरुङ विजयी भएका छन् ।
ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिका वडा नम्बर-६ मा पनि एमालेको प्यानल विजयी भएको छ । महाँकाल गाउँपालिका-६ को प्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामकृष्ण आचार्यसहित प्यानल नै विजयी भएको हो।
रसुवाको उत्तरगया वडा नम्बर १ कोदलित सदस्यमा दुई सय २६ मतका साथ ज्ञानु विक, खुल्ला सदस्यमा दुई ३४ मतका साथ पुर्णबहादुर घले र दुई सय ३३ मतका साथ बम बहादुर तामाङ एमालेका तर्फबाट विजयी भएका छन् ।
रसुवाकै पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका-१ को महिला सदस्यमा एक सय ६२ मतका साथसोनाम तामाङ, खुल्ला सदस्यमा एक सय ६७ मतका साथ दोर्जे तामाङ र एक सय ५९ मतका साथ निमा दोर्जे तामाङले एमालेका तर्फबाट विजयी भएका छन् ।
रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले विजयी सुरुवात गरेको छ । मुसिकोट-२ मा कांग्रेसका तर्फबाट सम्पूर्ण प्यानल नै विजयी भएको हो ।
कांग्रेसको तर्फबाट वडाध्यक्षमा काशिराम खड्का २ सय ५० मत अन्तरले विजयी भएका छन् । उनले ३ सय ७२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् ।
उनका प्रतिद्धन्दी माओवादी केन्द्रका नरबहादुर खड्काले १ सय २२ मत प्राप्त गरे भने नेकपा एमालेका हरि केसीले ८९ मत प्रात गरेका छन् ।
त्यस्तै महिला सदस्यमा र्इश्वरी खड्काले ३ सय ७० र दलित महिला सदस्य कल्पना बस्यालले ३ सय ५६ मत प्राप्त गरेर विजयी भएको मुख्य निर्वाचन कार्यालय रुकुमले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै सदस्यहरुमा खम्बु मल्ले ३ सय ६७ र दिनेश खड्काले ३ सय ८४ मत प्राप्त गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी दोलखाको जिरी नगरपालिका-१ मा कांग्रेसले क्लीनस्वीप गरेको छ । वडाध्यक्षमा लाक्पा शेर्पा २९७ मतसहित विजयी भएका छन् ।
उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका सांगे शेर्पाले १८२ र एमालेका निमा शेर्पाले १३१ मत पाए । त्यसैगरी वडा नं १ का सबै सदस्यहरुमा पनि कांग्रेस विजयी भएको छ ।
माओवादी केन्द्र जितेका स्थानीय तह
काभ्रेको रोशीगाउँपालिका वडा नं. १२ मा माओवादी केन्द्रको प्यानल नै विजयी भएको छ ।
रुकुमको बाँफिकोट गाउँपालिका-१ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नयाँ शक्तिको संयुक्त प्यानललाई हराउँदै माओवादी केन्द्रले विजयी सुरुवात गरेको छ ।
संयुक्त प्यानलबाट अध्यक्षका उम्मेदवार कर्णबहादुर मल्ललाई ५० मतले पराजित गर्दै माआवादी केन्द्रका हर्क मल्ल वडा अध्यक्षमा विजयी भएका हुन्
जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नम्बर-१ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर पुनको प्यानल विजयी भएको छ । गाउँपालिकामा पनि माओवादीको अग्रता रहेको छ।
रुकुमको सानोभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर-१ मा मा‌ओ‌वादी केन्द्रका टेकबहादुर पुनको पुरै प्यानल बिजयी भएको छ ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको पुरै प्यानल विजयी भएको छ ।
अध्यक्षका उम्मेद्धवार नवराज कार्कीको प्यानल महिला सदस्य रजना बुढा, दलित महिला सदस्य दुर्गा सार्की र खुला सदस्यहरु नर बहादुर बुढा र हरीबहादुर थापा विजयी भएका छन् ।
नयाँ शक्तिका पनि विजयी
रसुवाको पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका-१ र उत्तरगया गाउँपालिका-१ को वडा अध्यक्षमा नयाँ शक्तिका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् । उत्तरगया १ को वडा अध्यक्षमा दुई ७६ मत ल्याएर नयाँ शक्तिका बमबहादुर तामाङ विजयी भए । महिला सदस्यमा नयाँ शक्तिकै मञ्जु तामाङ विजयी भइन् । उनले दुई सय ७१ मत ल्याइन् ।
पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका–१ को वडा अध्यक्षमा नयाँ शक्तिका निमा दिण्डुप तामाङ विजयी भएकी छन् । उनले एक सय ४६ मत ल्याएकी छन् ।